Kedu otu esi ekpuchi na ihe mere na-arịgo Roses n'oge oyi - Mkpụrụ ubi - 2020
Esi kwadebe ma na-echekwa Roses maka oyi
Na mmalite nke mgbụsị akwụkwọ, ụbọchị na-eme ka ọ na-ada mbà ma na-agbarụ, na n'oge a, ngwaọrụ maka ọkụ bushes na-agba ọkụ kwesịrị ịdị na ndepụta nke ihe ubi na-eme ngwa ngwa nke ndị na-akwa nri. N'ezie, e nwere ụdị dị iche iche na-eguzogide oyi na-anabata ọnọdụ ọma oyi. Ma ihe ka ọtụtụ n'ụdị Roses bụ sissies ma chọọ nlezianya nchekwa maka oyi. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya otú e si akwadebe rive climates nke ọma maka oyi, ụdị ụdị ebe obibi dị mma maka nke a, na ihe omume onye na-akwa ákwà kwesịrị ịkwadebe Roses maka oyi.
Esi kwadebe osisi maka oyi
Ewepu ahihia na mwepu wepu
Trimming na Hilling
Ụzọ iji kpuchie roses
Na-ewu nke etiti
Mgbe na otu esi ewepu ndo
Ntak na mgbe iji kpuchie roses
Omume nke ubi n'ubi roses maka oyi na-adabere na mpaghara ikuku nke horticulture na ụdị Roses. Ngwọrọgwu na mgbarị na-eto eto na-achọ oké nchebe oyi site na oyi, karịsịa ma ọ bụrụ na ikuku ikuku na-ada n'okpuru -15 Celsius C ma nọrọ n'ogo a ruo ogologo oge.
Ị ma? N'afọ 2002, a na-ebute osisi dị iche iche na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie "Ụdị abalị" iji nyere ndị ọkà mmụta sayensị aka ịchọpụta mmetụta nke ịdị arọ dị ala na-esi ísì ụtọ. Ebumnuche nke ọmụmụ ihe ahụ bụ iji melite ekpori ndụ maka ọtụtụ ngwaahịa na-ere.
Kwụsị fertilizing Roses na nitrogen site na mbubreyo August ruo n'oge opupu ihe ubi. Ọ bụrụ na okooko osisi ahụ ga-ekpuchi oyi n'ime ala, mgbe ahụ, ọ dị ha mkpa ka ewepụ ha na trellis banyere izu isii tupu mmalite nke ntu oyi.
Mụtakwuo banyere ịrị elu Roses, ịrị elu Roses na-agụnye ụdị dịka Rosarium Hütersen, Mary Rose, Abraham Derby, New Dawn, Pierre de Ronsard.
Mgbasa ndị Russia nwere ike imebi ọbụna ụdị ndị kachasị eguzogide ọgwụ, mee ka nke a bụrụ:
mgbanwe mgbanwe ngwa ngwa;
mgbọrọgwụ mmerụ site na oge na-emetụ na thawing;
mebiri ezé site na ezé ezé;
mmerụ site na ice kpuru.
Onye oru ubi novice kwesiri imata na enwere ike izere nsogbu niile a n'ubi ahihia ma oburu na i ji osisi nke oma gbanye osisi.
Anyị na-eme ihe iji dozie rose bushes maka oyi:
Nchebe oyi na-amalite site na nkwụsị nke nri fatịlaịza nitrogen na osisi site na njedebe nke August. Nitrogen na-agba ume uto nke Ome ọhụrụ, nke ga-eme ka osisi ahụ daa mbà, ọ ga-abụkwa obere oge oyi-siri ike karịa onye toro eto. Ọ bụrụ na onye na-elekọta ubi ahụ hụrụ na ome ọhụrụ malitere ịmalite site na isi ohia ahụ na September, ha ga-ewepụ ya na onye nchekwa iji gbochie osisi oyi na-atụ n'oge oyi.
Ọtụtụ ndị kwenyere na ntachi anya nke oge oyi nke Roses ga-amụba mgbe (ma ọ dịkarịa ala otu) ụbịa oge ọmụmụ na potassium.
Mgbe October 1 gasịrị, agaghịkwa egbutu okooko osisi, kwe ka ha gbaa oge ma ghọọ mkpụrụ osisi. Mmepe nke mkpụrụ osisi ahụ na-enyere aka mee ka osisi bushes dị ike.
Site na mmalite nke September, ji nwayọọ nwayọọ belata ọkwa ọkwa mmiri. Ọ ga-enye aka ịmalite usoro nrụgide osisi. Nọgide na-enyocha ala mmiri, site na njedebe nke mgbụsị akwụkwọ na-edozi bushes nanị dị ka ọ dị mkpa, iji zere ihichapu ala. Kwụsị ịkwanye Roses mgbe ala kwụsịrị.
Ebelatala ebe nchekwa maka oyi, ma e wezụga maka mwepụ nke ndị nwụrụ anwụ, alaka ndị mebiri emebi ma nwee ọrịa. Chere ruo mgbe ọgwụgwụ nke April - oge a kacha mma ruru eru maka mmiri kwachaa Roses.
Ị ma? Site na Middle Ages ruo ugbu a na Itali, a na-eji okwu ahụ "n'okpuru rose", ya bụ, na nzuzo. Ihe oyiyi nke rose dị ugbu a na akwụkwọ nzuzo nke Illuminati na ihe ịrịba ama na ha anọghị n'okpuru nkwupụta.
Dịka e kwuru n'elu, nri nitrogen adịghịzi etinye n'okpuru osisi rose na njedebe nke oge okpomọkụ. Kama nke ahụ, ị ​​nwere ike ịzụta osisi ahụ na-eji nri fatịlaịza tupu oyiing.
Nitrogen nri gụnyere ammonium nitrate, ammonium sulfate, potassium nitrate, calcium nitrate, urea.
Mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ mbụ:
10 lita mmiri;
25 g nke superphosphate;
10 g nke potassium sulfate;
2.5-3.5 g nke borax ma ọ bụ boric acid.
Nke a bụ iji fatịlaịza na mpaghara mita 4. A na-eji ejiji elu n'oge mmalite nke September.
Oge mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ nke abụọ:
16 g nke potassium monophosphate ma ọ bụ potassium sulfate;
15 g nke superphosphate.
A ghaghị iji ngwọta a kwadebere n'ụzọ dị mfe mee ihe n'ime awa iri abụọ na abụọ iji mee ka ọ ghara ihichapụ. Ọtụtụ mgbe, ịwụ nke nri agbakwunyere zuru ezu maka 3-4 okenye toro bushes. A na-eme ya izu abụọ mgbe nri mbụ.
Akụkụ nke ọrụ nke Roses na-ekpuchi maka oyi bụ ihicha ubi nke irighiri ihe, nke ga-enyere aka gbochie ọrịa ndị na-ebute ọrịa n'afọ ọzọ:
Ọrụ dị mkpa maka ndị na-anụ ákwà bụ iwepụ ihe nkwọcha na iberibe alaka, okooko osisi na epupụta, tinyere mkpụrụ osisi ndị ọzọ, ọ bụghị nanị mgbe roses, kama site na osisi ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na e nwere okooko osisi ndị ọzọ n'ubi (kwa afọ na wilted) nke na-eto n'akụkụ Roses, ị ghaghị iwepụ ihe niile.
A na-ewepu ihe ndị na-emepụta osisi site n'ubi ahụ site na iji zoo.
Ekwela ka Roses daa n'iyi ka o dina n'ala n'ala ubi. Ha nwere ike ịnwe spores nke ọrịa akwụkwọ, dị ka ntụ ojii na ero. Ihe ndi ozo nwuru anwu bu ebe obibi oyi na ebe iri nri nke ndi ogwu na umu ogwu ha, tinyere umu umu nje, ndi na-eme n'ọdịnihu ga-eme ka oria ojoo. Wepu ahihia, gbaa ma ọ bụ wepụ ya n'ógbè ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe ọkụkụ anaghị emepụta akwụkwọ - ọ na-agbasa ọrịa na ụmụ ahụhụ na-emerụ ahụ n'ubi ahụ.
Ị ma? Ụdị dị iche iche kachasị dị oke ọnụ na ụwa - "Juliet", bred na 2006. Ịzụlite ụdị dịgasị iche iche weere afọ iri na ise ma na-efu dollar ise.
N'etiti ma ọ bụ njedebe nke ọnwa November, izu ole na ole tutu ala amaliteghị, a ga-ekpuchi osisi ahụ na 10-12 centimeters nke ala ọma mmiri. A ghaghị ịgbasa mgbidi ahụ dịka mgbọrọgwụ nke ifuru ọ bụla.
A ghaghị ibute ala a site na ebe ọzọ n'ime ogige ahụ, ọ bụghịkwa na Chapleti. Mgbe ahụ, kpuchie oghere ụrọ na mgbọrọgwụ ya na ihe ọzọ 12 ruo 16 centimeters nke ihe ndị e ji esi nri, dị ka ahịhịa, ihe nkwụ, ma ọ bụ osisi ibe.
Mụta ihe dị na otú e si eduzi ihe, otú e si esi mee ihe na iji sawdust.
A ghaghị iwusi elu mulch elu elu ebe (site na ifufe na ala) na osisi spruce ma ọ bụ alaka osisi pine n'elu ya. I nwekwara ike tinye mulch ahụ n'ala site na iji "eriri".
Akara elu nke mulch ga-enyere aka mee ka okpomọkụ nke ala mgbọrọgwụ belata ma belata ihe ị ga-esi na-egbuke egbuke. Mgbakwunye ala na-eweta mgbọrọgwụ na alaka ala nke Roses, na-enyere ha aka iguzogide oké ifufe oyi.
Ọ bụrụ na usoro mgbọrọgwụ nke osisi ahụ na-anọgide na-enweghị na-egbuke egbuke, ọbụlagodi na ọ bụrụ na snow na akpụrụ mmiri mebiri akụkụ nke mbara igwe ahụ, osisi ohia ahụ ga-atụfu alaka ọhụrụ na mmiri.
Anyị na-arụpụta trimming bushes:
Were ihe eji eji osisi na-eme ihe ma wepu osisi nwụrụ anwụ na osisi bushes. Ọ dị mfe ịmata ọdịiche dị na ya site na agba ojii dị ndụ, a na-emegharị ya ruo mgbe mkpụrụ ndụ akwụkwọ ndụ na-apụta. A na-ebipụ alaka ndị ahụ site na nne osisi na ogo nke ogo 45, ihe dị ka 3 cm n'elu akwụkwọ osisi, nke na-eche ihu n'èzí nke shrub.
Iji melite ikuku ikuku na ìhè n'ime ohia, wepụ ihe niile ị ga-esi na-agagharị na alaka ndị na-eto n'ime ohia. N'otu aka ahụ, a na-ewepụ ọ bụla na-adịghị ike na aghụghọ.
Ike nke mkpụbelata na-adabere na ụdị rose. Dịka ọmụmaatụ, a na-egbutu rosị tii, ma wickers na-eji nwayọọ nwayọọ agbachaa.
Ị ma? Oge nke okenye kachasị elu n'ime ụwa dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku afọ. Ọ na-ebili megide mgbidi nke otu chọọchị Germany na Hildesheim. A na-achọta ebe a na-akpọ osisi oge ochie na ihe ndekọ si na 815 AD. Dị ka akụkọ ahụ dị n'oge ahụ, rosebush bụ ihe nnọchianya nke ọganihu nke obodo obodo ahụ, ọ bụrụhaala na ohia ahụ - obodo ahụ dịkwa. N'oge Agha Ụwa nke Abụọ (na 1945) bọmbụ bọmbụ chọọchị ahụ, mana osisi ahụ anwụghị. Mgbọrọgwụ ya nọgidere na-adị ndụ n'okpuru mkpọmkpọ ebe nke ụka ahụ, n'oge na-adịghịkwa anya, ohia ahụ agbaghaghachi.
Otu esi eme ya n'ụzọ ziri ezi na n'oge kwesịrị ekwesị:
Ebe obibi oyi maka ịrị elu Roses nwere àgwà nke ya. N'October, a na-ewepu vine na trellis na trellis. A na-agbada ha ala, dina ala, ma tinye ya n'ala site na "pin" nke si na waya siri ike. Ọ bụrụ na ohia ahụ emeela ochie ma tojuru, ọ dịghị mfe ịme. Ya mere, ọ dị mkpa ka nnukwu mmiri dị iche iche belata site na stellis na nkebi, jiri nwayọọ nwayọọ dọrọ ha ala ma belata n'ala. Enwere ike ime nke a site na ịdebe ịwụ jupụtara ájá ruo n'elu ụtarị ahụ, nke ga-eji nwayọọ nwayọọ mee ka ohia wee dowe ya n'ala.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji gbasaa ihe ndozi n'elu ihe ohia n'elu osisi. (ihe a na-etinye n'elu ụlọ, polyethylene ma ọ bụ osisi ọta). Nke a ga-egbochi ala oyi kpọnwụrụ site na ịkpọtụrụ ndị na-acha ifuru.
Edobere usoro nchebe oyi iji hụ na ntu oyi anaghị emetụta osisi oyi, na iji gbochie mmetụta na-ebibi ihe nke na-emetụ ihe na-emetụ ala ma na thawing. Adịla na-amalite ikpuchi bushes n'oge na-adịghị anya.
Chere ruo mgbe ọtụtụ n'ime epupụta dị na Roses na-amanye ma daa, mgbe nke a gasịrị, ị ga-anakọta akwụkwọ niile dara ada na mpempe ndị ọzọ na-acha ahịhịa ndụ. Nke a ga - enyere aka izere ọrịa ndị na - efe efe na - ezighi ezi, ọ ga - abụkwa ezigbo mgbochi ọrịa ọrịa ndị ọzọ n'afọ ọzọ. Ngwurugwu osisi ahihia, etinyela ya n'ime ụlọ compost, ebe oyi na-agaghị adị elu iji gbuo ọrịa. A na-eme usoro nke ịchacha akwụkwọ ndị ahụ n'ọtụtụ akụkụ, malite na ala nke ohia. E nwere ike igbutu akwukwo oyi ọbụlagodi na ntu oyi, tupu igbanye osisi. Mgbe ahụ, tinye ohia ahụ n'ala ma kechie ya na ihe ọ bụla na-enweghị ike inweta ezé ezé.
Ná ngwụsị October ma ọ bụ ná mmalite November, tupu ịhazi rose maka oyi, wepụ ochie mulch si na basal oyi akwa niile osisi ma gbasasịa ọhụrụ organic mulch, dị ka compost nri ma ọ bụ peat. Ọ na-enyere aka igbochi ihe omume nke ọrịa n'ọdịnihu, na-egbochi mgbọrọgwụ si na-egbuke egbuke, na-eme ka uto nke osisi dị ngwa na mmiri.
Ịkwanye ma ọ bụ winding roses kacha mma hibernate mgbe ha na-ewepụ si trellis, tinye na ala na-ekwe ka ekpuchi snow iji chebe ha site oyi oyi. Ọ bụrụ na ọnọdụ ihu igwe gị adịghị ekwe ka ị gụọ na snow miri emi n'oge oyi, ị nwere ike fesa ala ma ọ bụ gbanye n'elu alaka (alaka ogologo) nke osisi ahụ dina n'elu ala. O nwekwara ike inwe nnukwu ụlọ ị ga-enwe, na-enweghị ha tupu ewepụ ya na trellis. A na-ahapụ ha na ọnọdụ a na-ejikọta na trellis, n'ihi na ọ na-egbochi ntu oyi, a na-agbanye osisi ahụ n'ọtụtụ ebe na a na-ekpuchi ya ma bụrụ akụkụ nke ya na polyethylene. Na kwa, dị ka a na-ahụ maka ụdị ohia ahụ, a na-eme ka mpaghara basal gbasie ike site na primer na inedible mulch maka ụmụ oke.
Mgbe mulch na-agwụ aghara na isi nke ohia - ịkwesiri iji ọgwụgwọ oyi mee ihe nke Roses (ọgwụgwọ na kemịkal pụrụ iche) iji gbochie mmepe nke ọrịa ndị na-akpata ọrịa n'ọdịnihu.
Iji jide snow n'elu ihe owuwu ahụ, ị ​​nwere ike ịme ọta ma wusi ihe owuwu ahụ niile. A na-eji osisi fir na osisi fir mee ọ bụghị nanị n'ihi okpomọkụ, kamakwa iji gbochie ọdịdị nke òké ndị na-adịghị anabata isi ísì ọma. N'ihe dịpụrụ adịpụ nke ogige ahịhịa ahụ, ndị na-akwa nri nwere ike gbasaa baits na-egbu egbu maka òké.
A ghaghị iwu nke ọma n'elu osisi toro ogologo, akụkụ ya dị n'akụkụ kwesịrị ịnọgide na-emeghe ruo mgbe oké mmiri ozuzo dị. A na-ekpuchi ha kpamkpam mgbe okpomọkụ dị ntakịrị -5 ... -10 Celsius C.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ụmụ oke nọ n'ogige ahụ, ọ ka mma ịghara ịdakwasị akwa nke mulk nke ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa, dị ka ụmụ oke ji obi ụtọ na-anọ n'oge oyi na ndo ahụ e nyere ha, na-emebi mgbọrọgwụ na akpati nke osisi rose bushes.
Ụlọ nchebe maka ịgagharị Roses dị mkpa karịsịa na ebe ọ na-etinye oyi na oyi, ma obere snow dị. Enwere ike ịmepụta osisi e ji osisi rụọ, bụ nke a na-etinyezi mkpuchi ikpo ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike itinye alaka osisi na etiti, na n'elu ha - ihe nkiri plastik iji kpuchido mmiri.
Kedu ihe nwere ike iji mee ihe dịka onye na-ekpo ọkụ:
igbe osisi na plastic;
plastic ifuru akụ;
ngalaba spruce ma ọ bụ osisi fir.
Ị ma? Osisi kachasị elu n'ụwa kachasị elu - "Lady Banksia" ọcha, na-eto eto na Arizona (USA). Osisi ohia a etoola n'elu uzo nke di ihe kariri puku ato.
Ntugharị Roses chọrọ nlebara anya pụrụ iche. Ndị ọkachamara rose growers kwadoro na ị ga-ewepụ ha n'osisi, dina ha n'ala ma kpuchie ha ihe nchekwa-nchekwa, mana nke a anaghị adaba maka ọtụtụ ubi ubi.
Kama nke ahụ, ị ​​nwere ike ịnakọta ndụmọdụ nke ogologo alaka nke akwa ahụ ma kpochie ha na burlap (ọtụtụ n'ígwé), na-eji twine iji nweta mkpuchi. Jide n'aka na ijuputa ala na isi nke osisi a ma kpuchie mgbọrọgwụ na mulch.
Ọ bụrụ na onye na-elekọta ubi enweghị ike ịdebe Roses n'oge niile (n'ihi na ọ dị ndụ n'ebe ọzọ), mgbe ahụ, ogologo osisi si n'October dị na ala, a na-ejikwa compost mejupụta mpaghara mgbọrọgwụ. Ruru ogbe ato ato iji chebe ohia site na ntu oyi. Ọ ka mma ịkwadebe ala iji mee ka ohia dị ọkụ n'ọdịnihu ma chekwaa ya n'okpuru ihe mkpuchi na akọrọ mmiri ka ọ ghara ịmị mmiri, n'ihi ya, ọ gaghị emetụ mmiri (nke ga-eji ya mee ihe dị ka ebe mgbọrọgwụ siri ike).
Ala dị oke mma maka ichebe mgbọrọgwụ, ebe ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, ájá adịghị ejide okpomọkụ ma mgbọrọgwụ ga-ifriizi, ebe obibi basal na sawdust dị ize ndụ na mmepe nke ọrịa na ọrịa.
Ọ bụrụ na snow agbaala adaba na okpomọkụ dị n'èzí dị ala, ọ dịghị ihe na-akpata nchegbu, n'ihi na snow na-echebe osisi ahụ site n'ịfri.
Ọ dị mkpa! Lelee ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-akwado, n'akụkụ n'akụkụ, iji kwụsie ike iji hụ na ike ya dị. Ọ bụrụ na snow ma ọ bụ ifufe na-efegharị na trellis n'oge oyi, ọ nwere ike ịkụda ngwa ngwa a na-ekpuchi n'elu ala ma mebie ya.
Na mbido nke oge opupu ihe ubi, onye na-elekọta ubi ekwesịghị ịgba ọsọ iji wepụ ihe ndo oyi ahụ na-acha ọkụ ọhịa:
ọ bụrụ na ikuku ikuku dị elu, anyanwụ na-enwu na mbara igwe, ma ala ejighi ọkụ, mgbe ahụ, ndị na-eto eto n'oge uto adịghị ahụ mmiri dị mkpa. Na mgbakwunye na ihe niile, ohia enwekwaghị ebe obibi nke anyanwụ ruo ọtụtụ ọnwa, akwụkwọ ndị na-eto eto nke malitere ịmalite nwere ike ịnata ahụhụ site na "ụkọ na-ahụkarị";
Otú ọ dị, ọ gaghịkwa ekwe omume ịkwụsị iwepu ebe obibi oyi na osisi. Ozugbo okpomọkụ dị mma na-adịgide mgbe niile, mmiri ga-eguzosie ike n'ihe ndị ruuru ya, oghere ndị na-egbuke egbuke jupụtara na ọdịda ala na mulch scrape n'akụkụ, na-eme ka mgbọrọgwụ jupụta na oxygen. N'oge a, a na-emeghe akụkụ nke elu nke ụlọ Roses;
wepu mulch ma na-eri osisi ndị nwere ezi fatịlaịza maka ezinụlọ pink. Osisi ndị a dị nnọọ nlezianya na njikọkọ fatịlaịza mgbe nile, ya mere, mgbakwunye mmiri dị mkpa;
n'oge "February windo" (tumadi) okooko osisi nwere ike oge ntoju. Nsogbu a na-eyi osisi bushes egwu n'oge mmalite nke oyi, ebe ọ bụ na enwere ike ịdị na-agbanwe okpomọkụ site na ntu oyi ka ọ dị. Tụkwasị na nke ahụ, ohere nke ịlanahụ okooko osisi na oyi ga-abawanye ma ọ bụrụ na ụmụ ha na-eto eto na-esi ike (na-enweghị ebe obibi) tupu mmalite nke ntu oyi.
Ịgba Roses maka oyi na-adị nnọọ mfe, mana ọ bụrụ na rosary adịghị oke, ọ gaghị ewe oge.
Ọ dabara nke ọma, Roses na-ele anya na-atụgharị uche ma na-adọrọ adọrọ - ísì ụtọ ha na okooko osisi mara mma na-ezobe ohia dị ike. Ọtụtụ n'ime ndị Roses, ndị ji nlezianya ejiri nlezianya kpuchie, ga-alanarị n'oge oyi na ntakịrị ihe funahụrụ ha.
Rosa Parade (Parade) - nkọwa nke ụdị clyming dị iche iche
Esi kpochapu ogwu na okpokoro okpomoku
Ụdị na-adịghị ọcha na nsogbu anụ ahụ - nduku "Sineglazka". Omume nke iche iche na nkọwa nke poteto na foto
Basil adịghị eto ma ọ bụ na-eto eto: gịnị mere o ji mee, gịnịkwa ka anyị kwesịrị ime ugbu a?
Osisi na-adọrọ mmasị na nke dị egwu "Akụkụ Nri": nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche, ịkọ ihe, foto tomato
Nduku "Sineglazka": njirimara, ịkọ agrotechnology
Otu esi akụ ma gbasaa osisi Spirea Billard (ala ahịhịa juru) n'ụlọ
Ebe obibi ala n'ogige: nkọwa nke ụmụ ahụhụ ahụ, ihe ị ga-eme mgbe enwere ebe
Ụdị eyịm maka akuku na mba
Ọgwụgwọ na ịchịkwa apricot moniliasis
Rosa Elf (Elfe) - nkọwa nke ụdị dị iche iche na atụmatụ ya